amụma nzuzo | Mortgage Loan na Mortgage Refinance
Na-ege ntị nke a Post
Onye nwe a website, bụ onye soò na na Amazon Services LLC Associates Mmemme, ihe Mgbakwunye mgbasa ozi omume iji nye a n'aka maka saịtị irite mgbasa ozi ụgwọ site mgbasa ozi na-ejikọ http://mortgageloanandmortgagerefinance.com ka Amazon Njirimara gụnyere, ma na ọnweghị oke, amazon.com, endless.com, myhabit.com, smallparts.com, ma ọ bụ amazonwireless.com.
Na anyị na saịtị, nzuzo nke anyị ọbịa bụ nke oké mkpa ka anyị. Nke a na iwu nzuzo akwụkwọ obụk ụdị nke onye ozi na-natara na-anakọtara site anyị na saịtị na otú ọ na-eji.
Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na Web saịtị, anyị na saịtị-eme ka eji log faịlụ. The ọmụma n'ime log faịlụ na-agụnye internet protocol (IP) adreesị, ụdị ihe nchọgharị, Internet Service Provider (ISP), ụbọchị / oge stampụ, ezo / ụzọ ọpụpụ peeji nke, na ọnụ ọgụgụ nke clicks iji nyochaa na ọnọdụ, dọọ saịtị, track ọrụ ije gburugburu saịtị, na-akpọkọta ozi igwe mmadụ. Adreesị IP, na ndị ọzọ na ihe ọmụma dị otú na-adịghị jikọrọ ozi ọ bụla na-idemesie amata.
Kuki na mgbama weebụ
anyị na saịtị otú iji kuki iji chekwaa ọmụma banyere ọbịa mmasị, ndekọ ọrụ-kpọmkwem ọmụma nke na peeji nke onye ọrụ ohere ma ọ bụ gaa, hazie Web peeji ọdịnaya dabeere na ọbịa ụdị ihe nchọgharị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na esenowo eziga site ha nchọgharị.
DoubleClick DART Kuki
Google, dị ka a atọ ọzọ na-ere, -eji kuki iji mgbasa ozi na anyị na saịtị.
Google si eji nke kuki DART enyere ya na-eje ozi na mgbasa ozi iji ọrụ dabere na ha nleta anyị na saịtị na saịtị ndị ọzọ na Internet.
Ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na Google ad na ọdịnaya netwọk iwu nzuzo ndị na-esonụ URL – http://www.google.com/privacy_ads.html.
anyị na saịtị nwere enweghị ohere ma ọ achịkwa kuki ndị a na-eji site-atọ ndị ọzọ-akpọsa ngwá ahịa.
Ị kwesịrị ịkpọ nwoke nzuzo atumatu nke ndị a-atọ ndị ọzọ ad sava ihe ọmụma zuru ezu ha na-eme nakwa dị ka ntụziaka banyere otú iji-apụ na omume ụfọdụ. anyị na saịtị si na iwu nzuzo na-adịghị emetụta, na anyị apụghị ịchịkwa na-eme nke, dị otú ahụ ndị ọzọ-akpọsa ngwá ahịa ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị gbanyụọ kuki, ị pụrụ ime otú ahụ site gị onye nchọgharị nhọrọ. Ihe ọmụma zuru ezu banyere kuki management na kpọmkwem ihe nchọgharị weebụ nwere ike na ihe nchọgharị si iche weebụsaịtị.
Voice-ihe karịrị site TTSEngine.com
Adịghị ịzụta ụlọ, ịzụta obi.